သရုပ်ဆောင် အနေ ဖြင့် mrtv4ဇာတ်လမ်း တွဲ မှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် တော့မယ့် အကြောင်း ပရိတ်သတ် ကို အသိပေးလာတဲ့ ဖေ့ဘွတ် ဆယ်လီ ငြိမ်းမြတ်သူ – Real Link
သရုပ်ဆောင် အနေ ဖြင့် mrtv4ဇာတ်လမ်း တွဲ မှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် တော့မယ့် အကြောင်း ပရိတ်သတ် ကို အသိပေးလာတဲ့ ဖေ့ဘွတ် ဆယ်လီ ငြိမ်းမြတ်သူ
လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် တွင် ဆယ်လီ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေ ကြားမှာ ဝေဖန်ပြောဆိုမှု အများအပြား ရှိခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ် တဲ့ ငြိမ်းမြတ်သူ ကတော့ ခြိမ့်ကေကို နဲ့ တွဲဖက်သရုပ် ဆောင်ခဲ့တဲ့ MV ရိုက်ကူး အပြီးမှာ တရှိန်ထိုး နာမည်ကြီး လာခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကိုဗစ်ကာလမှာလည်း သူမကတော့ ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်တွေ ကို မရပ်နားပဲ ကြိုးစားပြီး ဆက်လက်လုပ် ကိုင်နေသူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။
သူမကတော့ ကြော်ငြာတွေရိုက်ကူးနေရပြီး photo model အဖြစ်လည်း ရိုက်ကူးနေရတဲ့ သူမကို ချစ်ခင်အားပေးတဲ့သူတွေ ကို သူမရဲ့ နေ့စဥ်လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေကို လည်း မျှဝေလေ့ ရှိပါတယ်။
ထို့အပြင် ယခုအခါမှာ လည်း ငြိမ်းမြတ်သူက သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးတော့မည့် အကြောင်းကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် သူမကတော့ ‘ MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ မကြာခင် တွေ့ရ တော့မယ့် တက်သစ် ဆ အနုပညာ ရှင်လေးက..? ‘ ဆို ပြီးရေးသား ထားကာ မျှဝေလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမက အရင်ကတည်းက ဝေဖန်သူတွေများခဲ့ပြီး ယခုလည်းပဲ သူ့ရဲ့မန့် အောက်မှာ ဝေဖန်နေ ကြပြီး share များဖြင့်လည်း မှတ်ချက် မျိုးစုံလည်း ပေးထားကြတာ တွေ့ နေရပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ပြောနေကြပါစေ ငြိမ်းမြတ်သူ က တော့ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခံရမှု တွေရှိနေပေမယ့်လည်း ယခုအခါမှာတော့ MRTV4ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ အထိ အောင်မြင်ခြေလှမ်းတွေ စတင်လာခဲ့ပြီလို့ ဆိုရမှာပါနော်။
လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် တွင် ဆယ်လီ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေ ကြားမှာ ဝေဖန်ပြောဆိုမှု အများအပြား ရှိခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ် တဲ့ ငြိမ်းမြတ်သူ ကတော့ ခြိမ့်ကေကို နဲ့ တွဲဖက်သရုပ် ဆောင်ခဲ့ တဲ့ MV ရိုက်ကူး အပြီးမှာ တရှိန်ထိုး နာမည်ကြီး လာခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကိုဗစ်ကာလလည်း သူမကတော့ ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်တွေ ကို မရပ်နားပဲ ကြိုးစားပြီး ဆက်လက်လုပ် ကိုင်နေသူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။
ထို့အပြင် ယခုအခါမှာ လည်း ငြိမ်းမြတ်သူက သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးတော့မည့် အကြောင်းကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် သူမကတော့ ‘ MRTV-4 ဇာတ် လမ်းတွဲ မှာ မကြာခင်တွေ့ရ တော့မယ့် တက်သစ် ဆ အနုပညာ ရှင်လေးက..? ‘ ဆို ပြီးရေးသားထားကာ မျှဝေလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမက အရင်ကတည်းက ဝေဖန်သူတွေများခဲ့ပြီး ယခုလည်းပဲ သူ့ရဲ့မန့် အောက်မှာ ဝေဖန်နေ ကြပြီး share များဖြင့်လည်း မှတ်ချက် မျိုးစုံလည်း ပေးထားကြတာ တွေ့ နေရပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ပြောနေကြပါစေ ငြိမ်းမြတ်သူ က တော့ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခံရမှု တွေရှိနေပေမယ့်လည်း
ယခုအခါမှာတော့ MRTV4ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ အထိ အောင်မြင်ခြေလှမ်းတွေ စတင်လာခဲ့ပြီလို့ ဆိုရမှာပါနော်။
Previous post အမျိုးသား ထုကြီး ရင်တလှပ်လှပ် ဖြစ်သွားစေ မယ့် နန်းမွေစံ ရဲ့ ဗွီဒီယို
Next post ညဝတ် ပါးပါးလေး နဲ့ အမိုက်စား ဘော်ဒီလေးကို လှုပ်ခါရမ်းပြီး ကပြလိုက်တဲ့ ယဥ်လက် ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး